Vashandisi veMiitomo vari kumira vachishandisa application | IPhone nhau
Vashandisi veMiitomo vanoita kunge vari kumira vachishandisa app
Nintendo paakataura kuti ichavhura mitambo yemafoni nhare, vazhinji vashandisi vakatozviona isu tichitamba mhando dzemhando pamusoro paMario kana Zelda. Asi pavakazivisa kuti yavo "yekutanga" mutambo waive kuzove Miitomo uye isu takazoona kuti iko kunyorera kwaive nezvei, vamwe vashandisi vaisakwanisa kunyadziswa. Uye ndeyekuti Miitomo rudzi rwemagariro chikuva icho chine zvishoma kana chisina chekuita nechero ipi yemitambo yemavhidhiyo yakaita Nintendo mukuru.
Miitomo payakarova zvitoro zvakasiyana zveapp, iyo app yaive kurodha pasi kanodarika gumi miriyoni nguva, saka zvese zvaiita kunge zvinoratidza kuti pfungwa yacho yaizobudirira. Dambudziko nderekuti muyero wekutanga kazhinji hauna kuvimbika, asi iwe unofanirwa kumirira kwechinguva kuti uone kana maitiro achienderera mberi uye kana iko kushandiswa kwekushandisa kuri kuenderera. Izvo ndizvo chaizvo, zvinoenderana neblog SurveyMonkey Njere, hazvisi kuitika nechisarudzo chemagariro chakatangwa naNintendo apfuura Kurume
Miitomo richava dhorobha remweya here?
Pane chimwe chinhu chinoratidza kuti ramangwana hariratidzike zvakanaka kuMiitomo: mune chero mhando ye social network, chinhu chakajairika chingave chekuti, kana ichizobudirira, mashandisiro ayo aizove makuru nguva imwe neimwe. Kana chikumbiro chemagariro umo vashandisi vasingaite zvinopfuura kutaura vachitaurirana nevamwe vashandisi vachiona kuti vashandisi vanomira sei kuchishandisa, zvishoma zvingaitwe kutora ndege.
Kana iwe uchifananidza kushandiswa kweMiitomo nemimwe mitambo yakadai seCandy Crush kana Clash Royale, iyo Nintendo application "inotambwa" hafu kana zvishoma vhiki rega rega, uye izvo uchifunga kuti mimwe mitambo miviri yakura kwazvo, kunyanya iyo Candy Crush. Mifananidzo kubva kuSurveyMonkey Intelligence inoratidza kuti Vashandisi vangangosvika mamirioni maviri nezviuru zviviri vachiri kutamba, zvinoreva kuti chikamu chimwe chete kubva muzana chevanhu vakadhonza iyo app ndivo vanoishandisa nguva dzose.
Zvinosara kuti zvionekwe zvinoitwa naNintendo kudzosera mamiriro ezvinhu, asi zvinoita sekunge vakawana zvisirizvo nekuburitsa mutambo wemanyepo. Chikamu chakanaka ndechekuti, pamwe mushure mekutambura kutadza uku, ivo vanofunga kuburitsa mitambo iri nani mune ramangwana. Takamirira iwe, Mario.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Vashandisi veMiitomo vanoita kunge vari kumira vachishandisa app
Ini ndinofunga kuti zvakawanda zvine chekuita nekuti iko kunyorera hakuna kuitirwa munhu wese (ona facebook, whatsapp, nezvimwewo). Nekuvhurwa chete mune mimwe misika, inoganhurira zvakawanda kumushandisi nekuti kana tikazviona kubva pane imwe nhanho, nhasi internet nehukama hwemagariro zvinoitwa kuti tisvike kwatisingakwanise (panyama) pakati penyika nenyika.
Kunyangwe mutungamiri weAlfabheti anoshandisa iPhone, inodaro Samsung inogadzira nhare dziri nani
Apple inofarira kuchaja zviteshi zvemagetsi emagetsi